Wafdi ka socda Turkiga oo gaaray Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda Turkiga oo gaaray Kismaayo
A warsame 1 September 2014 1 September 2014
Mareeg.com: Wafdi ka socdo dowladda Turkiga ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose. Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba iyo qeybaha bulshada ayaa garoonka Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdiga.
Hoggaamiye ku-xigeenka labaad ee maamulka KMG ah ee Jubba, Cabduqaadir Lugadheere oo wafdiga ka soo raacay dalka Turkiga ayaa sheegay in uu wafdiga isla maanta magaalada Kismaayo kula kulmay hoggaanka maamulka KMG ah ee Jubba.
Lugadheere ayaa hoosta ka xarriiqay in labada dhinac ay ka wadahadleen sidii dowladda Turkiga ay deegaaannada Jubbooyinka u gaarsiin laheyd deeqo waxbarasho iyo mashaariicda horumarineed ee ay ka waddo Soomaaliya.
Madaxa Mashaariicda Horumarinta iyo Iskaashiga Caalamiga Ah ee Hay’adda Turkiga (TIKA) ee Soomaaliya, Axmed Gokcek ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin booqashada wafdiga ee Kismaayo.
Axmed Gokcek ayaa tilmaamay in dowladda Turkiga ay ka go’an tahay taageerada shacabka Soomaaliyeed, si loo sii xoojiyo xiriirka walaalnimo ee dalalka Soomaaliya iyo Turkiga.
Waayeesha ugu da’da weyn dunida oo ku nool Mexico
Golaha wasiirada oo meel mariyey hindise sharciyeedka saxaafadda